Online မှာတွက်ချက်လို့ ရမဲ့Math tools များ | IT sharing
Online မှာတွက်ချက်လို့ ရမဲ့Math tools များ
ko phyoe ● Wednesday, April 17, 2013 knowledge
ဘာလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်း post မတင်ဖြစ်တာ ၁နှစ်တိတိရှိသွားပီဗျ။ ဒီညတော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်လာမှန်းမသိဘူး မပြန်ခင်လေး ကိုယ်သိတာလေးတွေ ပြန်လည်ရှယ်ယာလုပ်ချင်လို့ ပါ။သိပီး တတ်ပီးသားမိတ်ဆွေများအတွက်တော့post title ဖတ်ပီး လှည့်ထွက်လိုက်တော့ ပေါ့ဗျာ.......:)
ခုခေတ်က အရမ်းလွယ်ကူတယ်။ဘာလိုချင်လည်း ဘာသိချင်လည်း ဘာလုပ်ချင်လည်း internet ကြီးတခုလုံးရှိနေတယ်လေ။ကျွန်တော့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေကတော့wiki , youtube, google, facebook တို့ ပါပဲ။ကဲပါဗျာ လေကြောရှည်နေတာနဲ့ လိုရင်းမရောက်တော့ ဘူး...
တခါတလေ စာလုပ်ရတဲ့ အခါ မှာ အတွက်အချက်တွေဆို ဦးနှောက်ကငယ်ငယ်ကလို ထွက်မလာတော့ ဘူးဗျ။ဒီတော့ သင်္ချာပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အချက်တွေအတွက် အလွယ်တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့Online free site လေးတွေစုပီးပြန်လည်ရှယ်ယာလုပ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားများအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အောက်ကလင့်ခ် တွေမှာ သွားေ၇ာက်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်..........
Scientific Shell Calculator
(အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော) မိမိသည်သာလျှင် မိမိ၏ အားထားရာဖြစ်သည်။
Time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you've lost it you can never get it back.........
ebook for computer (1)
world's news (7)
4 May 10, 19:38 Q 1: ဆရာ ကျွန်တော် အပြင်လိပ်ခေါင်း ဖြစ်နေလို့ သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ် နေရတော့ မကုသသေးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင် ပါသလဲ။ ...
ကြောက်စရာ...Tuberculosis (TB) တီဘီ
အဖြစ်များသော သေစေနိုင်သည့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည်။ Mycobacterium tuberculosis ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိ...
ကျွန်တော်လိုမျိုး တာရာပွကြီး ကာတွန်းတွေကြိုက်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဟိုတုန်းကလိုလူစား အပါအ၀င် ရွှေအဆင်း ခေတ်ပြိုင်မှတ်စုမျာ...
ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန ( Ministry of Education)
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၀န်ကြီးဌာနများ တွင် ပညာရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန ( Ministry of Education )ထားရှိပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက...
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ဆရာမင်းလူရဲ့ စာအုပ်များကိုတင်ထားပေးပါတယ်။ မင်းလူ - သင်္ခါရများ မင်းလူ - ခေါင်းလောင်းထိုးသောဝတ္ထုတိုများ မင်းလူ...
ကျွန်တော်က အသက် 25 နှစ် အိမ်ထောင်မရှိပါဘူး။ လိင်တံထိပ်ပိုင်း ဆီးလမ်းကြောင်းက အခုတလောမှ ယားနေပါတယ်။ ခဏခဏ ဆိုသလို ယားကျိကျိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ...
18 Jul 10, 22:14 aung: ဆရာခင်များ နာခေါင်းသွေးလျှံတာဘာကြောင့် ဖြစ်တာပါသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းပူတဲ့ UAE မှာ အလုပ် လုပ်နေရတာဆိုတော့...
(ယမုန်နာ ဆေးခန်းလက်ထောက်များအတွက် သင်ခန်းစာသာဖြစ်သည်၊) လူ့ ခန္ဓာကိုယ်အား ရေ၊ (အမိုင်နိုအက်စစ်)၊ (ဖက်တီးအက်စစ်)၊ (နူးကလီးရစ်အက်စစ်)...
အာဆီယံအဖွဲ့သို့ ၀င်ခွင့်ပြုပေးရန် အရှေ့တီမောနိုင်ငံ လျှောက်ထား
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံသစ် အရှေ့ တီမောသည် ၎င်းဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ အသင်း (အာဆီယံ) အဖွဲ့ကြီးသို့ဝင်ခ...
မိန်မဟူဘိ ထိုကတ္ကိက မရှိမကောင်းရှိမကောင်း မပေါင်းလဲခက် ပေါင်းလဲခက်၏ ဆိုတဲ့ မန်လည်ဆရာတော်ဘရားကြီးရဲ့စာသားလို ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အမြင်လ...
to learn... myanmar.homegoo mysteryzillion MMTTD technical-seven myanmarfamily myanmaritmen zdnet
IT sharing © 2012 | Designed by LogosDatabase.com, in collaboration with Credit Card Machines, Corporate Headquarters and Motivational Quotes